Sooyaalka Qaraxyada Wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye | KEYDMEDIA ONLINE
Sooyaalka Qaraxyada Wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye
Tan iyo markii ay dowladda Soomaaliya dhagax dhigtay mashruuca dhismaha waddada isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye, waxa ay wadadu la-daalaa-dhacaysay amni xuma baahsan oo soo wajahday.
MUQDISHO, Soomaaliya - Mashruuca dhismaha wadadan waxaa qandaraaskeeda qaatay shirkad laga leeyahay dalka Turkiga, waxaan maal-gelinaysa dowladda Qatar. Dhismaha waddadan waxaa markii ugu horeysay la dhagax dhigay February 2019, waxaana tan iyo markaas waddada ka dhacayay qaraxyo iyo sidoo kale dilal qorsheysan oo lala eeganayo shaqaalaha ku howlan dhismaha waddada iyo ciidamada ilaalada ka ah, waxaana ka dhacay ku dhawaad 10 qarax!.
Qaraxii ugu horeeyay ee tan iyo markii la bilaabay dhismaha waddada ayaa waxuu dhacay 28/April/2019, kaasoo ka dhacay deegaanka Weydoow ee duleedka magaalada Muqdisho, waxaana ku dhintay hal qof, halka tira kor u dhaafeyss 6 ruuxna uu dhaawac kasoo gaaray.
Muddo Shan Bil ah kadib oo ku beegan 2/September/2019, qarax loo adeegsaday gaari nooca loo yaqaano NOAH ayaa ka dhacay bar lagu hubiyo gaadiidka, taasoo ku taal isgooyska loo yaqaan Ex- Control Afgooye, qaraxa oo aan saameyn geysan ayaa waxa markii horeba ka hortagay Ciidamada amaanka kuwaas oo fashiliyay waxaana goobtaas ku dhintay qofki qaraxa waday.
Qaraxa seddaax ayaa dhacay 16 maalin kadib qaraxii hore oo ku beegan 18/September/2019, gaari ay saarnaayeen qaar kamid ah Injineerada dhisayay wadada ayaa lagula eegtay deegaanka Garasbaaleey, qaraxan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa haleelay gaariga ay la socdeen Injineerada waxa ayna dhaawacyo fudud ka soo gaareen mid ka mid ah Injineerada iyo hal askari oo ilaalo u ahaa .
Laba bil kadib dhamaadkii Sanadkii 2019 isgooyska Ex-control Afgooye waxaa ka dhacay mid ka mid ah qaraxyadii iyo weeraradii ugu dhimashada badnaa ee dalka ka dhaca, 28/December/2019 Subax sabti ah gaari xamuul ah oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxo ayaa waxa uu ku qarxay isgooyska Ex-control Afgooye, waxana qaraxaasi lala eegtay dad shacab ah iyo sidoo kale qaar ka mid ah Injineerada wadada dhisayey , waxaana qaraxaasi ku dhintay Laba ka mid ah shaqaalaha dhismaha wadada iyo in ka badan 100 qof oo shacab ah, kuwaasoo u badnaa arday.
Bilawgii sanadkii cusbaa 2019, 17 maalin uun kaddib qaraxii ay dadka badani ku dhinteen, ayaa haddanaa waxa 14/January/2020, qarax uu ka dhacay deegaanka Ceelasha Biyaha , waxana qaraxaasi ku dhintay laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda.
Qaraxa Ceelasha biyaha Afar maalin dabadeed kolanyo ay la socdeen shaqaalaha Turkiga ee dhisayay wadada iyo ciidamo ka tirsan dowladda ayaa qarax ismiidaamin ah lagula eegtay agagaarka Baar Ismaaciil ee degmada Afgooye, qaraxan oo ay ku dhinteen sida la xaqiijiyay seddax qof oo ay ku jireen askar, halka tira kor u dhaafeyso 20 qofna uu dhaawac ka soo gaaray.
31/March/2020, ayaa sidoo kale waxaa qarax la dhigay waddada dhinaceeda uu haleelay gaari ay saarnaayeen dad shacab ah kaasoo geeystay qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac, waxaana qaraxa oo ka dhacay agagaarka Isbitaalka Xaawo Cabdi ee duleedka muqdisho ku dhintay 6 ruux halka tira ka badan 7 ruuxna uu dhaawac ka soo gaaray , dadka gaariga saarnaa ayaa la sheegay in xiligaas ay ka soo amba-baxaeen Muqdisho kuna sii jeedeen deegaanka Daafeed ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Muddo kadib 15/October/2020, qarax kale ayaa waxa uu ka dhacay wadada dhismaha lagu wado, qaraxan ayaa waxaa lala beegsada ciidama ka tirsan kuwa dowladda, gaar ciidamada sida qaaska ah loo taba-babaray ee Haramacad, waxaana ay waxyeello ka soo gaartay qaar ka mid ah ciidamada.
27/October/2020 Mas'uul ka tirsan maamulka degmada Kaxda, ee gobalka banaadir ayaa qarax loogu xiray xilli uu ku sugna deegaanka Siinka-dheer ee duleedka muqdisho.
Labada bil kadib Maanta oo ay taariikhdu tahay 2/January/2021 waxaa qarax xooggan uu ka dhacay deegaanka seddax Buurood oo u dhaw deeganka Xaawo Cabdi iyo Calamada, waxaana ku dhintay Laba qof oo mid kamida yahay turki, afar ruux oo kalena wey ku dhaawacmeen.
Dowladda mudada xilheynteedu sii dhaamaaneyso ayaana ku guul dareeysatay Afartii sano ee ay joogtay sugidda ammaanka wadadaas iyo sidoo kale dalka intiisa kale.